Khasaare culus oo ka dhashay Dagaal ciidammada AMISOM iyo kuwa Somalia ku qaadeen Fadhiisimmada Kooxda shabaab ee Muqdisho | Berberanews.com
Home WARARKA Khasaare culus oo ka dhashay Dagaal ciidammada AMISOM iyo kuwa Somalia...
Khasaare culus oo ka dhashay Dagaal ciidammada AMISOM iyo kuwa Somalia ku qaadeen Fadhiisimmada Kooxda shabaab ee Muqdisho
Muqdisho-(Berberanews) – Inta la ogyahay 10 qof ayaa ku dhintay dagaal ciidammada Dawladda Ku-meelgaadhka Somalia oo ay gacansiinayaan AMISOM saaka ku qaadeen fadhiisimmo kooxda Al-shabaab ku lahayd qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Ciidamada DKMG ah iyo AMISOM ayaa la sheegay inay ku gacan sareeyeen dagaalka ay ku qaadeen Al-shababaab, kana qabsadeen goobo istaraaji ah oo xarummo u ahayd Kooxdaas, kuwaasoo ay ka mid yihiin qubuuraha Barakaat oo ka tirsan degmada Yaaqshiid .
Afhayeenka AMISOM, Col. Paddy Ankunda oo isaguna ka hadlay dagaalka ayaa sheegay inay kaga dhaawacmeen laba askari oo ciidamadooda ka tirsan, balse ma uusan sheegin khasaaraha ay u geysteen xoogaggii Al-shabaab.
“Waxaan dagaalkii saakay ku qabsannay deegaanno ay ka mid yihiin qabuurihii Bakaraat iyo Jaamacadda Muqdisho,” ayuu Col. Ankunda ku sheegay shir jaraa’id oo uu Muqdisho ku qabtay. Isagoo sheegay inay Muqdisho oo dhan gacanta ku hayaan.
Xarakada Al-shabaab ayaa qiratay in lagaga awood roonaaday dagaalkii ay la galeen ciidammada, islamarkaana ay dib isu abaabulayaan sidii ay dib ugu qabsan lahayeen goobahoodii laga qabsaday.
Previous articleNuxurka kulan Madaxweyne Silaanyo isugu yeedhay Hoggaamiyeyaasha xisbiyada Qaranka
Next articleMaamulaha Guud ee Dahabshiil oo ka hadlay Hawlaha Xawaaladaha Soomaalida ee Minnesota iyo arrimo kale